एमसीसीको पक्षमा उभिन प्रचण्डलाई आयो ३ बजेसम्मको अल्टिमेटम, त्यसपछि के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
एमसीसीको पक्षमा उभिन प्रचण्डलाई आयो ३ बजेसम्मको अल्टिमेटम, त्यसपछि के हुन्छ ?
काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन शनिबार तीन बजेसम्मको डेडलाइन दिएको छ ।
बिहीबार दिउँसो संसद भवनमा ओलीसहित एमालेका नेतासँग संवाद गरेमा देउवाले सोही साँझ पुनः संवाद गरेका थिए । शुक्रबार माधव नेपाल र प्रचण्डसँगको छलफलपछि काँग्रेसका नेताहरुसँग आन्तरिक संवाद गरेका देउवा साँझ ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई साथमा लिएर देउवाले ओलीसँग करिब २ घण्टा संवाद गरेका थिए ।
ओलीसँगको छलफलको सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी पास गर्न अलिकति सकारात्मक कुरा गरेको सुनाए । प्रचण्ड र माधव नेपालले भोट हालेर एमसीसी पास हुने भए आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको जवाफ दिए । ओलीले भने, ‘हामी त एमसीसी पास नै होस् भन्न चाहन्छौं । तर हाम्रो माग पूरा नभई हामी त भाग लिग पाउँदैनौँ । हामीलाई संसद प्रवेशमा सभामुखले रोक्नुभएको छ ।’
कुराकानी हुँदै जाँदा ओलीले प्रचण्डको विश्वास भने गरि नहाल्न सुझाएका थिए । ‘तपाईले एमसीसीको पक्षमा मत हाल्छ भनेर पत्याउनु भएको छ ? भोलि कुरा फेर्नुहुन्छ,’ ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि प्रचण्डले भोलि कुरा फेर्छन् कि भन्ने आशंका रहेको जवाफ फर्काए । ‘मलाई पनि छ त्यो आशंका । त्यसैले त तपाईं सहयोग गर्नुस् न त । तपाईं र हामी मिलौँ, एमसीसी पास गरौं । किन यसमा अल्मलिइराख्ने ?,’ देउवाले ओलीलाई भने ।
त्यसका लागि काँग्रेसले वातावरण बनाए आफू तयार रहेको ओलीको भनाइ थियो । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा र १४ सांसदको कारबाहीका विषयमा लामो छलफल भयो ।
एमाले नेताहरुले यी दुई विषयमा एमसीसी पास नहुनु पूर्व छिनोफानो हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, ओलीले सभामुख नहटाइ एमसीसीमा एमालेले भाग लिन नसक्ने अडान राखे । काँग्रेस नेताहरुले भने फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने भन्दै यी विषयमा त्यसपछि जान सकिने बताए ।